PSJTV | प्रचण्ड अंगालोमा सपनाको ब्यापार
ओलीका रास्ट्रियताका कुरा भोलीको पुस्ताको मुल्यांकन गर्नेछ।
शनिबार, १२ जेठ २०७५ राजेश मिश्र
केपी ओलीको भाषणकै भरमा नेपाल समृद्दिको यात्रामा लम्किएला? शंका छ।
कथित बाम एकतापछि मुलुकका नामी बिष्लेशकहरु स्थिरताको दुहाई दिंदै आशावादी आलेख प्रकाशित गर्दैछन। आशावाद असल अभ्यास हो। यसले मान्छेलाई आफ्नो गन्तब्यमा पुग्न प्रेरित गर्छ। तर मुग्लिङ्ग जाने बसमा चढेर मनाङ् पुगिंदैन। बिश्वास र अन्धविश्वास दुई फरक धारणा हुन्, तर यीनमा लयात्मक समानता छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली बिश्वास र अन्धविश्वास बीचको यो खाडललाई उखान र तुक्काले पुर्ने प्रयत्न गर्दैछन।
स्वप्नद्रश्टाहरु बोल्दैनन्। दूरदृष्टि नहुनेहरु जनतालाई सपना देखाउँछन्। नेपाल जस्तो मुलुकका जनताका लागि सपना देख्नु अधिकार होईन, प्रारब्ध हो। प्रधानमन्त्री ओली सपना भजाउन सिपालु छन्। उनी "मुखमा रामराम बगलीमा छुरा" भन्ने उखानका साक्षात उदाहरण हुन्।
भूँईचालो पछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई ओलीले आफ्नो राजनीतिक नगदका रुपमा रुपान्तरित गरे। उनको "राष्ट्रवादी" छवी बन्यो। त्यतिनैबेला माओवादीको "युथ लिग" को सिको गर्दै उनले खडा गरेको "यूथ फोर्स" भारतीय नाकाहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गर्न थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालाई संबिधान जारी गर्ने चटारो थियो। ओलीलाई सुशीलपछिको प्रधानमन्त्री हुने हतारो। सुशील कोईरालाले ओलीको निर्देशनमा हुनेगरेको तस्करीलाई वास्ता गरेनन।
ओलीको निर्देशनमा "युथ फोर्स"ले झन्डै छ महिना तस्करीको पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणाली स्थापित गर्यो। पुरानो एमालेका नेताहरुसंग त्यो पैसा अझै बाँकी होला।
लम्पसार हुनुको अर्थ दिवंगत जयललिताको गोडामा उनका समर्थकले ढोग्नु मात्र होईन। जयललिता आफ्नो जमानाकी प्रख्यात अभिनेत्री थिइन्। उनी राजनीतिमा आएपछि संधै तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री भईन। धेरैले उनको नून खाएका थिए। भारतमा त्यसैपनि नेताहरुको गोडा ढोग्ने चलन छ। नेपालकै मधिसे नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो खुईलिएको कुर्कुच्चा दूधले धुन लगाएको तस्वीर पनि हामीले देखेका छौं।
केपी ओलीले मोदीको कुर्कुच्चा धोएनन। त्यो आवश्यकता पनि थिएन। मोदी आफै माता जानकी, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको पाउ पर्न आए। तर यो ओलीको बिजय थिएन। मोदीले आफ्नो मुलुकका लागि कूटनीति खेले। ओली साक्षी मात्र होईन, सहयोगी भए। नेपालको संबिधान जारी गर्नेबेला मधिसे सवाल ज्वाजल्यमान थियो।देश विभाजन गर्ने क्रममा क्षेत्र नम्बर दुई लाई भारत अधिनस्थ प्रदेशका रुपमा ओलीले हस्ताक्षर गरिसके। मोदी पहिले काठमाण्डौ किन आएनन? जनकपुरमा ओली आफै मोदीको स्वागत गर्न पुगे। संबिधान संशोधनको कुरा फेरि आउंदैछ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्ने माग मधिसे दलको भन्दा पनि भारतको हो। पहाडमा जनजातिको नाममा प्रदेश घोषणा हुनुपर्ने माग युरोपेली मुलुकहरुको हो। माओवादी, अथवा त्यो पार्टीका नेता प्रचण्डले भारतमा शरण पाए, युरोपेलीहरूको पैसा खाए। उनले यी एजेण्डाहरुको वकालत गर्नु स्वाभाविक हो। एमाले पनि यीनै एजेण्डा बोक्ने गैर सरकारी संस्थाहरुको आर्थिक भरथेग बाट चलेको पार्टी हो। लम्पसारवाद वास्तविक हो।
चीन नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको स्थायी शक्ति कायम रहोस भन्ने चाहन्छ। डेढो आँखा हेर्ने मान्छे कुटील हुन्छ भन्ने लोकोक्ति छ। राजा महेन्द्रमा यो कुरा लागू हुन्छ। उनी डेढो आँखाले हेर्थे। बिदेश जाँदा कालो चश्मा लाउँथे। उनले जवाहरलाल नेहरुको ईशारामा बीपी कोईरालालाई अपदस्थ गरे। त्यसपछि अचानक चीनसंग नेपाल जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउने घोषणा गरे। भारत आत्तियो। तर महेन्द्रले बेलायती अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भने, "चिन्ता नलिनुस, कम्युनिजम ट्याक्सी चढेर आउंदैन।" चीनले नेपालको राजसंस्थालाई एउटा भरपर्दो स्थायी शक्तिका रुपमा पत्यायो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आ चीनले कहिल्यै साथ दिएको उदाहरण छैन। चायालीस सालको आन्दोलनले नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरेपछि समेत कहीं राजाकै पक्षमा देखियो। गिरिजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री थिए।
तर चीनले तत्कालीन राजा बीरेन्द्रलाई बोआवो कन्फरेन्समा आमन्त्रित गर्यो। उनी त्यहाँ तीन दिनका लागि निम्तालु थिए। तर चीनियाँ सरकारले बीरेन्द्रको भ्रमणलाई राजकीय यात्रामा परिवर्तन गर्दै अर्को एक साता लम्ब्याएर, ग्रेट हलमा बिशेष सम्मान समेत दियो। गिरिजा हेरेको हर्यै भए। तर यो चीनले त्यतिबेला भारतलाई दिएको संकेत थियो।
भारत नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देख्न सक्दैन। त्यो उसको हितमा छैन। सन् सतचालीसमा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि त्यहाँ अनौठो राष्ट्रवाद जागृत भयो। बेलायतीहरुले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई भनेका पनि थिए, "सुगौली सन्धीमा तिमीले गुमाएको जग्गा फिर्ता दिउँ कि बार्षिक दूई लाख लिन्छौ ?" मोहन शमशेरले दुई लाखमा सहमति गरे। उता सरदार बल्लभ भाई पटेल नेपालमा सेना पठाएर कब्जा गर्नुपर्ने कुरा गर्न थाले। उनको आँखामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व थिएन। तर बीपी कोईरालाको महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुसंगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण यो हुन सकेन। भारतको पहिलो सरकार को हुने सम्बन्धमा पनि विवाद थियो। क्षेत्रिय समितिहरुले अत्याधिक बहुमतका साथ सरदार बल्लभ भाई पटेलको सिफारिस गरेका थिए। त्यसको तुलनामा नेहरुको केहीपनि थिएन। तर गान्धीले पटेललाई रोकेर नेहरूलाई सिफारिश गरे। अन्यथा, पटेल प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उनले हैदरावादमा भारतीय सेना हुलेर कब्जा गरे जस्तै नेपालमा आक्रमण गर्ने थिएनन भन्ने कुराको कुनै "ग्यारेण्टी" थिएन। बीपीको अनुपस्थितिमा आज केपी ओलीले राष्ट्रवादको नारा दिनु सम्भव थिएन।
केपी ओली जे देखिन्छन, त्यो होइनन्। उनी जति वाकपटु छन्, त्यतिनै खतरनाक पनि। दुक्खको कुरा, उनीसंग कुनै "भीजन" छैन। "भीजन" शब्दको नेपाली अनुवाद गर्न गाह्रो छ। हामी "स्वप्नदृष्टि" बाट काम चलाउँ होला। केपी भारत गए, मोदी नेपाल आए। दुवैले कुर्ता साटासाट गरे। सकियो। अब केपी चीन जान्छु भन्दैछन। चीनका राष्ट्रपति पनि नेपाल आउलान। तर नेपालमा नियन्त्रित अस्थीरता कायम राखेर आफ्नो दूनो सोझ्याउने भारतीय चाहनालाई काट्ने मन्त्र ओली संग छ? भारत र चीन मिल्दैछन्। आर्थिक स्वार्थ छ। दुई धनीहरुले एउटा गरीबका लागि शत्रुता लिनु जरुरी छैन। ओलीले यो कुरा बुझे राम्रो।
ओलीले धेरै कुरा बोलेका छन्। हावा बाट बिजुली सम्भव छ। उनले ढाँटेका होइनन। घर घरमा ग्याँस पुर्याउन पनि सम्भव छ। यी झीनामसिना कुरा हुन्।
तपाईं सानो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर त्यसले तपाईंलाई सानो बनाउँदैन। ठूलो सोच्नुस। तपाईं एउटा किड्नीको भरमा बाँच्नुहुन्छ। प्रचण्ड वा बामदेव लाई कसरी ठेगान लाउने भन्ने कुरामा समय खर्च नगर्नुस। समस्या अरु पनि छन्।
तपाईंको उमेर अनि स्वास्थका कारण सन् २०५० सम्म तपाईं जीवित हुने सम्भावना क्षीण होला। यो लेखककै जीवनको के भरोसा? तर तपाईंलाई थाहा होस्, त्यो बेला सम्म विश्वको जनसंख्या नौ खर्ब सात अर्ब पुग्नेछ। ती थुप्रिएका मुखलाई खुवाउन साठी प्रतिशत बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्नेछ। पानीको माग पचपन्न प्रतिशतले बढ्नेछ। एशियामा मात्रै एशियामा मात्रै तीन खर्ब चार अरब जनसंख्या हुनेछ। यहाँ मान्छे बाँच्नका लागि आवश्यक शतप्रतिशत खाद्यान्न र पानी कसले मर्दा हामीले के दिएर गयौं प्रधानमन्त्रीज्यू ?
हिमालय नामको प्राकृतिक पर्खाल नेपाल, भारत र चीन बीचको भूराजनीतिक यथार्थ हो। यो क्षेत्रको पर्यावरणीय परिवर्तनले हिमालय मुनी बस्ने हामी र अन्य मुलुकका चौबीस करोड जनसंख्यालाई प्रभाव पार्छ। विश्व पानीको संकटले आक्रान्त हुँदैछ। आगामी दुई दशकमा विश्वका चालीस प्रतिशत जनता पिउने पानीको अभावमा ब्याकूल हुनेछन। हाम्रो हिमालय मुनीको झन्डै दुई खर्ब जनसंख्याको पिउने पानीको श्रोत हिमालय मात्रै हो। भारतले हामीलाई संधै अर्घेलो गर्छ। महाकाली सन्धी देखियो। अरुण खोला पनि गयो। पानी नेपालको शक्ति हो। ओलीले पनि यो शक्ति भारतको भक्तिमा खर्च गरे।
ठूला आयोजनाका नाममा हिमालमुनी जंगल स्वाहा हुँदैछन्। लाग्ने बाली लगाईंदैन। खेतमा काम गर्ने युवा छैनन्। जो थिए, ती खाडी तिर गए। हुनेखानेहरु शीत भण्डारमा सुरक्षित माछा र मासु आयात गर्छन। नहुनेहरु भारतको धान, दाल र प्याज समेत आयात गरेर गर्जो टार्छन। रेमिटेन्सको पैसामा ठूलो बजेट बनाउनुभन्दा उत्पादक काममा खर्च गरे हुने हो नि।
ओलीका रास्ट्रियताका कुरा भोलीको पुस्ताको मुल्यांकन गर्नेछ। आखिर प्रचण्डलाई अँगालो हाल्ने मान्छे न हो।
पटेल प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उनले हैदरावादमा भारतीय सेना हुलेर कब्जा गरे जस्तै नेपालमा आक्रमण गर्ने थिएनन भन्ने कुराको कुनै "ग्यारेण्टी" थिएन। बीपीको अनुपस्थितिमा आज केपी ओलीले राष्ट्रवादको नारा दिनु सम्भव थिएन।
ओली प्रचण्ड चीन महेन्द्र भारत महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरु सुगौली सन्धी मोहन शमशेर बीपी कोईराला बल्लभ भाई पटेल गिरिजा जनजाति लम्पसारवाद मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ पेट्रोलियम
एकैदिन निगमका १० जहाज ग्राउन्डेड, २२ मध्ये एउटा मात्रै आन्तरिक उडान
विदेशीले लिएका ३३९ नेपाली नागरिकता रद्द
21st Mar 2019 पिएसजे न्युज
बाँके: प्रहरीले अपहरणमा संलग्न अभियुक्तलाई ६ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रपुरका ५० वर्षीय निजामुद्दिन साईलाई पक्राउ गरिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–९ का २२ वर्षीय मुन्नु अन्सारीलाई अपहरण गरी ...
2nd Mar 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौँ : पशुपतिनाथ मन्दिरमा यस वर्षको महाशिवरात्रिमा विगतको भन्दा साधुसन्तको आगमन बढेको छ । महाशिवरात्रिको विषयमा जानकारी दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भारतको प्रयागराजमा लागेको ...
काठमाडौं : नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा नौ कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रूपमा देखाएको चासोप्रति सरकारले प्रतिवाद गरेको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयसहित युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड ...